Lahatsoratra nataon'i Dan Purvis momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Dan Purvis
Nomarihan'ny Brand Republic ho iray amin'ireo mpangataka haino aman-jery 50 Top UK, Dan Purvis dia mazoto amin'ny fitambarana atiny, varotra ary varotra hampifandray ireo orinasa amin'ireo mpihaino azy mba hamoahana ny sandan'ny asa aman-draharaha sy ROI.
"Customer first" Tsy maintsy ny Mantra
Alatsinainy Oktobra 2, 2017 Zoma, Oktobra 6, 2017 Dan Purvis
Ny fampiasana ny herin'ireo teknolojia ara-barotra be pitsiny maro misy dia hetsika tsara ho an'ny orinasa, saingy raha tsy tadidinao foana ny mpanjifanao. Ny fitomboan'ny orinasa dia miankina amin'ny teknolojia, zava-misy tsy azo iadian-kevitra izany, fa ny tena zava-dehibe noho ny fitaovana na ny rindrambaiko dia ny olona amidinao. Ny fahafantarana ny mpanjifanao raha tsy olon-kafa mifanatrika izy ireo dia misy olana, fa ny habetsaky ny angon-drakitra ahafahana milalao miaraka aminy
Maninona i Martech dia paikady stratejika amin'ny fitomboan'ny orinasa
Alatsinainy, 12 Jona, 2017 Dan Purvis
Ny teknolojia marketing dia nitombo tato anatin'ny folo taona lasa, mainka fa ny taona maro. Raha mbola tsy nanaiky an'i Martech ianao, ary miasa amin'ny varotra (na varotra, amin'izany) dia tsara kokoa ny miakatra an-tsambo alohan'ny hiverenanao any aoriana! Ny teknolojia ara-barotra vaovao dia nanome ny orinasa fotoana tsara hananganana fampielezan-kevitra mahomby sy azo refesina, manadihady ny angon-drakitra ara-barotra amin'ny fotoana tena izy, ary manamboatra ny varotra azy ireo hitarika fiovam-po, famokarana ary ROI, ary hampihena ny vidiny, ny fotoana ary ny tsy fahaiza-miasa.